Fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana: fanatsarana ny fifandraisan'ny mpiasa amin'ny marary amin'ny hopitaly | Vahaolana OMG
Fakan-tsary miady amin'ny vatana: Manatsara ny fifandraisan'ny mpiasa miasa amin'ny marary amin'ny fahasalamana
Ny fakan-tsary mitafy vatana, araka ny anarany, dia fitaovana izay entina amin'ny vatana mba handraisana ny hetsik'ireo mpitafy azy. Ireo fakantsary ireo dia matetika ampiasain'ny sampandraharaha mpampihatra lalàna, toy ny departemanta polisy mba hanampiana amin'ny famahana ny heloka bevava. Nisy fivoarana lehibe teo amin'ny fahombiazana sy ny fahamendrehana, ary nisy ihany koa ny fihenan'ny fampiasan-kery nataon'ny manampahefana. Nisy ihany koa ny fanatsarana ny olom-pirenena, satria nilatsaka ihany koa ny isan'ny fiampangana diso ny polisy. Ny fakantsary mitafy vatana izao dia heverina ho fampiharana amin'ny indostria hafa. toy ny fitsaboana. Ity indostria ity ohatra dia nanapa-kevitra ny handray ity haitao ity hanampiana ireo mpiasan'ny fahasalamany hanatanteraka tsara ny asany.
Tany UK, ny toeram-pitsaboana sasany dia efa nanomboka nampiasa fitaovana toy izany. Araka ny fanadihadiana natao nandritra ny telo volana tany amin'ny Hopitaly Queen Elizabeth tao Birmingham, Angletera, dia nahitana fihenam-bidy tao amin'ny hopitaly 28%. Ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny hopitaly dia mitondra fakantsary fitambaran-dahatsoratra RS. Tamin'ireo fakantsary ireo dia afaka nandrakitra ireo fandrahonana rehetra amin'ny fanararaotana am-bava na fihetsika ara-batana hanoherana azy ireo izy ireo. Afaka nahantona fandrahonana na fihetsika tsy mitombina koa izy ireo, niaraka tamin'ny fanararaotana ara-pirazanana sy am-bava tamin'ny alàlan'ny fandraketana tamin'ny fakantsary. Ohatra, nisy ny vehivavy marary iray izay nandà ny handao ny departemanta vonjy maika ary nitaky ny fanafody fanafody ary nanendrikendrika ny olona hanao herisetra ara-nofo. Ny fakantsary fisie amin'ity raharaha ity dia nanaporofo fa mahasoa rehefa nampandrenesina fa voarakitra izy. Ity fanadihadiana ity amin'ny ankapobeny dia mampiseho fa ny fakantsary vatana dia nampiasaina tamin'ny sehatry ny fahasalamana.
Ao amin'ny Hillington Hospital NHS Foundation, any Angletera ihany koa, ny tobim-pahasalamana dia nanamafy ny fampiasana fakantsary fiakanjo. Ny tompon'andraikitry ny fiarovana izay mitondra ireo fitaovana ireo dia tompon'andraikitra amin'ny filazalazana ny marary mety hosoratana raha diso izy ireo na nanao zavatra tsy mendrika. Vokatr'izay dia nisy ny fihenan'ny herisetra. Afaka nahita ny lesoka teo amin'ny fanaraha-maso CCTV napetraka tany amin'ny hopitaly mihitsy aza ireo fakantsary fa ny fakantsary vatana dia mahazo tombony hanangona porofo amin'ny maha akaiky azy kokoa. Afaka nahafantatra mpiasa tsy nahazo alalana hiditra ny fakan-tsary nangataka hiditra ao amin'ny departemanta iray ireo fakantsary. Any amin'ny Hopitaly Cardiff any Wales, ny polisy misahana ny fiarovana no mamadika ny fakantsary indrindra mba hampihenana ny toe-javatra mahery setra. Fantatry ny marary fa azo atokisana eny an-kianja ireo horonantsary voarakitra, ary vokatr'izany, nihena ny herisetra sy ny fitondran-tena tsy mendrika amin'ny hopitaly izay mampiasa fakan-tsary miakanjo.
Fakan-tsary miady amin'ny vatana: Tokony havela ao amin'ny toeram-pitsaboana ihany ve izy ireo?
Ny hopitaly dia toerana anaovan'ny fiainana manokana tsiambaratelo ireo marary sy mpitsidika raha jerena ny toe-javatra ara-dalàna sy ara-dalàna takian'ny fahasalamana. Misy lalàna tena hentitra mifehy ny fampiasana sy famoahana ny mombamomba ireo marary mila izany. Ny ankamaroan'ny fitsaboana toy izany dia manomboka any amin'ny sampana vonjy taitra, izay faritra mila filaminana bebe kokoa, ka noho izany dia misy mpiasa misimisy manao fakan-tsary. Ny dinidinika momba ny niharam-boina sy ny vavolombelona dia notazonin'ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna ao amin'ity departemanta ity. Na izany aza, ireo izay mitafy fakantsary dia tokony hitandrina ny amin'izay safidiny hosamborina, satria ity toerana ity dia mety hahitana marary sy ireo niharam-boina hanome lanja ny fiainany manokana amin'ny toe-java-manahirana azy ireo. Betsaka ny mpanome tolotra ara-pahasalamana no namolavola politika sy fomba fiasa amin'ny antsipiriany momba ny fampiasana ekena sy mety an'ireo fitaovana firaketana ireo. Ohatra, ny fankatoavana am-bava na fanekena dia azo angatahina amin'ny marary alohan'ny handraisan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana izany.
Na dia mety miteraka ahiahy aza ny resaka momba ny fiainana manokana, ny fampiasana ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia voaporofo fa mahomby amin'ny ankapobeny rehefa ampiharina any amin'ny hopitaly. Miaraka amin'ny fepetra mety hamahana ny olana momba ny tsiambaratelo, ireo fitaovana ireo dia tena fitaovana mahomby sy mahomby ho an'ny indostrian'ny fahasalamana.
Fakan-tsary miady amin'ny vatana: Manatsara ny fifandraisan'ny mpiasa miasa amin'ny marary amin'ny fahasalamana no farany niova: Jolay 28th, 2020 by Admin
4291 Total Views 3 Views Today